Lafta-gareen waxba gacan kuma hayo – FEIT iyo maalintii 2-aad | KEYDMEDIA ENGLISH
Lafta-gareen waxba gacan kuma hayo – FEIT iyo maalintii 2-aad
Xildhibaannada Maamulkaas, ayuu ugu baaqay, in ay qaataan shahaadooyinka si doorashadii daahday loo dardar galiyo, wuxuuna uga digay in ay hormuud u noqday dib u dhac hor leh, xilli dalku u baahan yahay badbaado deg deg ah oo wadajir ku timaadda.
MUQDISHO, Soomaaliya – Shahaado bixinta Guddiga Doorashooyinka Heer Federaal, ayaa gashay maalintii labaad, xilli ay maanta marqaatigooda xildhibaanno soo qaateen xubno laga soo doorto Maamulka Koofur Galbeed oo uu hoggaaminayo Sheekh Aadan Madoobe.
54 Xildhibaan ayaa shalay si buuxda u dhameys tiray ku biiritaankooda Baarlamaanka 11-aad ee JFS, kuwaas oo FEIT, guddoonsiisay shahaadooyinka, waxaana maanta la filayaa in tiro xooggan qaataan aqoonsiga ugu danbeeya ee ay kaga mid noqonayaan Golayaasha.
Guddoomiyihii hore ee Baarlamaanka Dowladdii KMG aheyd, Aadan Maxamed Nuur [Madoobe], oo u taagan qabashada xilka Guddoomiyaha Golaha Shacabka, ayaa saaka qaatay shahaadada, xilli la warinayo in Lafta-gareen cadaadis ku hayo Xildhibaannada KGS.
Shir jaraa’id oo Aadan Madoobe, ku qabtay, Xarunta Guddiga FEIT ee Airport Hotel, ayuu ku caddeeyay jiritaanka cadaadiska Madaxtooyada Baydhabo, ku heyso xildhibaannada, wuxuuna arrintaas ku tilmaamay mid meel looga dhacayo karaamada xildhibaannimada.
Xildhibaannada Maamulkaas, ayuu ugu baaqay, in ay qaataan shahaadooyinka si doorashadii daahday loo dardar galiyo, wuxuuna uga digay in ay hormuud u noqdaan dib u dhac hor leh, xilli dalku u baahan yahay badbaado deg deg ah oo wadajir ku timaadda.
Shariif Maxamed Cabdalla, oo qudhiisu taagan baratanka kursiga Guddoomiyaha Golaha Shacabka, lagana soo doorto KGS, ayaa isna maanta qaatay shahaadada, wuxuuna sidoo kale, xildhibaannada ka soo baxay Baydhabo iyo Baraawe ugu baaqay in ay soo xaroodaan.
Kooxda waqtigu ka dhamaaday ee Farmaajo iyo Fahad hoggaamiyaan, ayaa xoogga saareysa in qaar ka mid ah xildhibaannada laga dhaadhiciyo in aysan qaadan shahaadada, si aan loo aadin doorashada Guddoonka Golayaasha Baarlamaanka 11-aad.
Hayeeshee, isku daygaas ayaan suura-gal noqon karin, maadaama, kaliya 139 Xildhibaan loo baahan yahay, si loo doorto, Guddoonka Golaha Shacabka, sida uu dhigayo qodobka 65aad ee dastuurka, halka Guddoonka Aqalka sare, ay dooran karaan 28 Senator, sida uu qabo qodobka 73aad.
Sida la filayo ku dhawaad 200, oo ka tirsan xubnaha Golaha Shacabka, ayaa shahaadada qaadan doona Todobaadkaan, halka inta badan xubnaha Aqalka sare guddoomi doonaan, taas oo xitaa suura-galin karta in loo dareero doorashada Madaxweynaha.
Lafta-gareen, oo ku daaban Farmaajo, ayaa doonaya in la fasaxo kursiga uu Fahad Yaasiin ka soo boobay Baladweyne iyo in la aqoonsado natiijada dooqashadii saddex kursi oo KG, ka yimid kuwaasoo ay hor istaageen Guddiga doorashooyinka heer Fderaal.
Guud ahaan doorashooyinka Baarlamaanka 11-aad ayaa mareysa meel gabagabo ah, waxaana baaqi ah 28 kursi, oo 16 ka mid ah taallo Gobolka Gedo, Saddex ka mid ah taallo baydhabo, halka Sagaal kale Maamulka Hirshabeelle ku dhiman yihiin.